PSJTV | निगमका जहाजः आकाशमा ६, जमिनमा १४ !
विमानस्थलभरि नेपाली ध्वजावाहक जहाज देखेपछि एकपटक प्रधानमन्त्रीले सहयात्री साथीलाई सोधेछन्, ‘नेपाल वायुसेवा निगमसँग निकै धेरै जहाज पो रहेछन्।’ ती साथीले भनेछन्, ‘ठीक भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, जहाज थुप्रै छन्। उड्दैनन् र यहाँ धेरै देखिएका छन्। मैदानभरि छन्। वाइडबडी पनि छन्। तर, जमिनमा छन्। आकाशमा छैनन्।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निगम दिवसमा यो प्रसंग सुनाउँदा त्यही संस्थाका कर्मचारीले परर्र ताली बजाए। जुलाई १ मा त्यसो भनेको तीन महिना बित्न लाग्यो, थन्किएका जहाज उडेनन्। बरु उडिरहेका थप थन्किए। सुन्दै अचम्म। निगमसँग १४ जहाज छन्, उड्छन् ६ वटा। बाँकी सबै प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘जमिनमा छन्।’
बेलामा मर्मत नगरी ठूलो समस्या निम्त्याएर थन्क्याउनु निगमको पुरानो रोग हो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको वाइडबडी एक सातादेखि ग्राउन्डेड छ। बन्न केही दिन लाग्न सक्छ। बोइङ ७५७ एक वर्षदेखि ‘कुवाएर’ राखिएको छ। बिक्री गर्न चाहे पनि बिकेको छैन। दुईमध्ये अर्को बोइङ भने बीबी एयरवेजलाई बिक्री गरिसकेको अबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ।
निगमले चीनबाट अनुदानमा ल्याएको एक र खरिद गरेको अर्को एक एमए ६० जहाजमध्ये एउटा मात्रै उड्ने गरेको छ। सुरुको एक साता दुइटै जहाज मुस्किलले उडेका थिए। त्यसयता कहिल्यै एकसाथ उडेका छैनन्।
बिग्रिरहने र एउटाको पाटपुर्जा झिकेर अर्कामा राख्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। चिनियाँ कम्पनीले मागेको समयमा पाटपुर्जा उपलब्ध गराउँदैन। एउटा सामान मागेको खण्डमा आउन महिनौं लाग्ने गर्छ। त्यही भएर एउटाका सामान जोगाएर अर्को चलाउने गरिन्छ। ‘दुनियाँमा यस्तो कहाँ होला?’, निगमकै वरिष्ठ एक इन्जिनियर आश्चर्य व्यक्त गर्छन्।
त्यस्तै, निगमलाई अनुदानमा आएको एक र खरिद गरेका तीनवटा वाई १२ मध्ये दुइटा मात्रै उडाएर दुइटा थन्क्याउने गरिएको थियो। अर्को एउटा पनि ग्राउन्डेड भएको छ। सञ्चालनमा छ– एउटा मात्र।
ती जहाजमा पाँच वर्षका लागि राखिएका अक्सिजन सिलिन्डरको समय सकिएको छ, फेरि राख्नुपर्ने भएको छ। तीनवटै जहाजमा एकैपटक यो समस्या देखिएकाले उडाउन नसकिएको निगमले जनाएको छ।
साधनस्रोत प्रशस्त भए पनि सधैं घाटामा जान्छ, निगम। जुनसुकै व्यवस्थापन आए पनि कहिल्यै सुध्रिँदैन यो।
निगम दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीले सोधेका थिए, ‘नेपाल वायुसेवा निगममा वायुसेवा निगमबाहेक घाटामा को छ अरू? यसमा सम्बद्ध थुप्रै छौं नि हामी, चढ्ने हौंला, चढाउने हौंला, उडाउने हौंला, कुदाउने हौंला, व्यवस्थापन गर्ने हौंला। घाटामा कोही छैन। बोक्ने वायुसेवा निगम एक्लै घाटामा छ। किन भो अर्बौं घाटा? के बिगा¥यो त्यसले? के नोक्सान ग¥यो त्यो जहाजले रु जहाजले गरेको होइन, हामीले गरिरहेका छौं।’
उनको संकेत निगम व्यवस्थापनप्रति थियो। अघिल्ला प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले झन्डै २५ अर्ब ऋणमा दुइटा वाइडबडी ल्याए। त्यसको खरिदमा नक्कली कम्पनी बनाइए।
ल्याइएका विमान पनि चल्न सकेनन्। त्यसलाई तीव्रता दिन मदन खरेललाई सरकारले अध्यक्ष बनायो। उनले झन् खस्काउँदै लगेको प्रधानमन्त्रीको आक्रोशले बताउँथ्यो।